Moe Sandar Condo For Rent (ID-659) အား ကမာရွတ် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
Moe Sandar Condo For Rent (ID-659)
Moe Sandar Condo for rent in Kamaryut Township. Near Sein Gay Har Shopping Center, Hledan Center and Hledan Market. Living area - 1350 sqft, has Living-room, Two Master Bed-rooms, One Single Bed-room, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Fully furnished condo. The monthly rent price of condo is - 15 Lakhs (Nego).
ငှားရန်ရှိသော မိုးစန္ဒာကွန်ဒိုမှာ ကမာရွတ်မြို့နယ် လှည်းတန်းဈေး၊ လှည်းတန်းစင်တာနှင့် စိန်ဂေဟာများသို့ သွားရောက်ရန် လွယ်ကူသည့်နေရာတွင်တည်ရှိပါသည်။ ကွန်ဒိုအိမ်ခန်းအကျယ် - ၁၃၅၀စတုရန်းပေရှိပြီး ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းကျယ် နှစ်ခန်း၊ အိပ်ခန်းငယ် တစ်ခန်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ပရိဘောဂအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ အသင့်ထည့်သွင်းပါရှိပါသည်။ မိုးစန္ဒာကွန်ဒို၏ လစဉ်ငှားရမ်းခမှာ - ၁၅သိန်း (ညှိနှိုင်း) ဖြစ်ပါသည်။
အမည်: Moe Sandar Condo For Rent (ID-659)